अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरै रोजगारी «
अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरै रोजगारी
सामाजिक सुरक्षा र श्रम कानुनको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका अनौपचारिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको देखाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा सम्पूर्ण रोजगारयोग्य उमेरका ६२.२ प्रतिशतले रोजगारी पाइरहेको देखाएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको श्रमशक्ति सर्भेक्षणअनुसार काम गर्नसक्ने जनसंख्या (१५ वर्षभन्दा माथि) को संख्या २ करोड ७ लाख रहेको छ । २०१७-१८ सर्भेक्षण अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९० लाखमध्ये रोजगारयोग्य जनसंख्याको ७१.५ प्रतिशत रहेको छ । १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको काम गर्नसक्ने जनसंख्या २७.३ प्रतिशत छन् भने श्रम जनशक्ति संख्या भने २०.३ प्रतिशतमात्र रहेको छ । नेपालको कुल रोजगारीमध्ये ४९ प्रतिशत ३५ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहको हिस्सा रहेको छ । प्रत्येक ५ नेपालीमध्ये १ जना कुनै न कुनै किसिमले रोजगारीमा रहेको देखाएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी कृषिजन्य क्षेत्रमा रोजगाररत रहेको देखिन्छ । यसैगरी नेपालीले दोस्रो धेरै रोजगारी पाएको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको छ । यसमा कुल रोजगारी पाएकामध्ये लगभग १७.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । नेपालको विभिन्न रोजगार क्षेत्रमध्ये तेस्रो ठूलो संख्याले काम गरिरहेको निर्माण क्षेत्र रहेको छ । निर्माण क्षेत्रमा १३.८ प्रतिशत रोजगारयोग्य जनशक्तिले काम गरिरहेका छन् । यसैगरी, सेवा र व्यापार व्यवसायमा सम्पूर्ण रोजगारीमध्ये एक चौथाई अर्थात २३.८ प्रतिशतले रोजगारी पाइरहेको जनाएको छ ।
प्रदेशिक रूपमा रोजगारीको अवस्था
प्रादेशिक रूपमा हेर्दा सबैभन्दा अगाडि प्रदेश नं. ३ रहेको देखिन्छ । यो प्रदेशमा २१ लाख २९ हजार मानिस कुनै न कुनै किसिमको रोजगारीमा रहेका छन् । यसैगरी दोस्रो बढी रोजगारी प्रदेश २ मा छ । यो प्रदेशमा १२ लाख ६१ हजार नेपालीले रोजगारी पाइरहेका छन् । तेस्रोमा प्रदेश–१ मा १२ लाख ८ हजार, चौथौमा प्रदेश ५ मा ११ लाख ३९ हजारले रोजगारी पाएका छन् । गण्डकी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा रोजगारी पाउनेको ंसंख्या क्रमशः ६ लाख ६ हजार, २ लाख ८८ हजार र ४ लाख ५५ हजार रहेको छ ।
नेपालीले औषत प्रतिहप्ता ४४ घन्टा काम गर्ने भएपनि भण्डारण तथा यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले प्रति हप्ता ५५ घन्टासम्म काम गर्ने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । कतिपय उद्योग तथा होटल, खाद्य सेवा र निर्माण क्षेत्रमा प्रतिहप्ता ४८ घन्टासम्म काम गर्ने गरेको देखिन्छ । सर्भेक्षणमा नेपालीको औषत कमाइ प्रतिमहिना १७ हजार ८०९ रुपैयाँ छ । नेपालमा लैंगिक रूपमा हेर्दा महिलाले प्रतिमहिना औषत ५ हजार ८४३ कमाउँदा पुरुषले ११ हजार ९ सय ७५ रुपैयाँ कमाउने गरेको देखिन्छ ।
बेरोजगार किन कम ?
सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्याको ९ लाख ८ हजार रोजगारयोग्य उमेरका नेपाली कामविहीन भएर रोजगारीको खोजीमा भौतारिइरहेको देखिन्छ । कुनै पनि कामको अनुभव हासिल नगरेका १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३८.१ प्रतिशत नागरिक रोजगारीको खोजीमा छन् । यसैगरी, २५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका ३१.१ प्रतिशत नेपाली नागरिक पनि रोजगारीविहीन जीवन बिताइरहेको देखिन्छ । यो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा ऊर्जाशील उमेर १५ देखि ३४ वर्ष समूहका ६९.१ प्रतिशत जनसंख्या रोजगारीको खोजीमा छन् । काम गर्नसक्ने उमेर समूहमध्ये ३०.४ प्रतिशत १२ महिनाभन्दा दीर्घकालिन बेरोजगारका रूपमा रहेका छन् ।
प्रादेशिक रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बेरोजगारी प्रदेश २ मा रहेको छ । जहाँ ३ लाख १७ हजार मानिस बेरोजगार छन् । यसैगरी प्रदेश ३ मा १ लाख ६१ हजार रोजगारयोग्य उमेर समूहका मानिस कामको खोजीमा रहेको देखिन्छ । प्रदेश १ मा १ लाख ३६ हजार मानिस बेरोजार छन् । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३१ हजार मानिसमात्र बेरोजगार छन् । गण्डकी प्रदेशमा ६० हजार बेरोजगार छन् भने प्रदेश ५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः १ लाख ४४ र ५९ हजार नागरिक बेरोजगार रहेको देखिन्छ ।
* ३५ देखि ४४ वर्षभित्रका ४९.१ प्रतिशत रोजगारीमा
* सबैभन्दा कम रोजगारी ६५ वर्ष माथि १३.४ प्रतिशत
* प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी २१ लाख २९ हजार रोजगारी
* सबैभन्दा कम रोजगारी कर्णाली प्रदेशमा २ लाख ८८ हजार
* १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३८.१ प्रतिशत बेरोजगार
* कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात ३१ हजार मात्र बेरोजगार
* प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी लाख १७ हजार बेरोजगार